True Detective – Gold Channel Movies
The Western Book of the Dead Jun. 21, 2015
Night Finds You Jun. 28, 2015
Maybe Tomorrow Jul. 05, 2015
Down Will Come Jul. 12, 2015
Other Lives Jul. 19, 2015
Church in Ruins Jul. 26, 2015
Black Maps and Motel Rooms Aug. 02, 2015
Omega Station Aug. 09, 2015
အခုတစ်ခါ Gold Channel ပရိသတ်ကြီးကို တင်ဆက်ပေးချင်တာကတော့ True Detective ဆိုတဲ့ အမေရိကန် မှုခင်းစီးရီးတွေပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ Season သုံးခုထွက်ရှိထားပြီး၊ ဆုတွေဆွတ်ခူး Review ကောင်းကောင်းတွေရရှိထားတဲ့ ဇာတ်လမ်းတွဲတွေပါ။
Season 01 မှာတော့ ၁၉၉၅ ခုနှစ်က အမေရိကန်နိုင်ငံ၊ Louisiana ပြည်နယ်က ဇိမ်ခံမယ် Dora Lange အသတ်ခံရမှုအပေါ် အခြေတည်ထားပါတယ်။ အဲ့ဒီအမှုကို အဓိကလိုက်ခဲ့တဲ့ Rustin “Rust” Cohle နဲ့ Martin “Marty” Hart တို့ကို နောင် ၁၇ နှစ်အကြာမှာ မေးမြန်းနေပုံနဲ့ ယှဉ်တွဲတင်ဆက်ထားတာပါ။
Louisiana ပြည်နယ်၊ Erath မြို့ပြင်က ကြံခင်းတွေထဲမှာ Dora Lange ဆိုတဲ့ အမျိုးသမီးဟာ ယဇ်ပူဇော်ထားသလို အသတ်ခံထားရပါတယ်။ အမှုကိုတော့ မိန်းမနဲ့အဆင်မပြေတဲ့ စုံထောက် Marty နဲ့ လူတိုင်းက ငကြောင်လို့သတ်မှတ်ကြတဲ့ Rust တို့က အဓိကစုံစမ်းရတာပါ။ နောင် ၁၇ နှစ်ကြာ သူတို့ကိုမေးမြန်းနေစဉ်မှာလည်း အလားတူဖြစ်ရပ်တွေကရှိနေဆဲမို့၊ သူတို့ရဲ့အမှုဟာ မပြီးသေးမှန်းသိခဲ့ရပါတယ်။
အတိတ်ကရော သူတို့နှစ်ယောက် ဒီအမှုကို ဘယ်လိုဖော်ထုတ်ခဲ့ကြသလဲ၊ သူတို့နှစ်ယောက် ဘယ်လိုအကြောင်းကြောင့် အဆက်အသွယ်ပြတ်သွားသလဲ၊ လက်ရှိကာလမှာ ဘယ်လိုဆက်လက်စုံစမ်းကြမလဲ၊ သူတို့ရဲ့အမှုက သူတို့ထင်တာထက်ကြီးမားနေတာကို ဘယ်လိုရင်ဆိုင်သွားကြမလဲ စသည်ဖြင့် ပရိတ်သတ်ကို ရင်တမမနဲ့ ဇာတ်လမ်းထဲမျောပါသွားလောက်‌ တင်ဆက်ပြထားပါတယ်။ Gold Channel ပရိတ်သတ်ကြီးလည်း ရှုစားတော်မူကြပါဦး။
PG Alert: မှုခင်းဇာတ်ကားဖြစ်တာမို့ ကလေးငယ်များ တစ်ယောက်တည်းမကြည့်ရှူဖို့နဲ့ အရွယ်ရောက်ပြီးသူများနဲ့သာကြည့်သင့်ကြောင်း ကြိုတင်အသိပေးလိုက်ပါရစေ။
Translated & Review by Susan Oo
TMDb Rating 8.3 1,751 votes
Shwe SinSeptember 11, 2021Reply
Season3ဆက်တင်ပေးပါဦး
Ko MyoAugust 24, 2021Reply
Season 1 နှင့် Season2တို့ရဲ့ Episode များ အားလုံး Link သေနေပါတယ်။ ပြင်ဆင်ပေးပါဦး ခင်ဗျာ့။
Kei KeiAugust 8, 2021Reply
season2‌ဒေါင်းမရဘူးလို့၊ Season3လည်းဆက်ပြီးဘာသာပြန်ပေးပါအုံး၊မျှော်နေရတယ် မင်မင်ရေ
N LynAugust 3, 2021Reply
LAugust 3, 2021Reply
Link လေးတွေ ပြန်ပြင်ပေးပါလား admin၊ တော်တော်များများ link ပျက်နေလို့၊ ကြည့်ချင်လို့ပါခင်ဗျာ
GarfieldJuly 29, 2021Reply
Season2ကဒေါင်းလို့မရတော့ လို့
Shwe sinJuly 20, 2021Reply
Season 3အပိုင်းသစ်​ တင်ပေးပါအုန်းမင်မင်
Shwe SinJuly 17, 2021Reply
‌July 8, 2021Reply
Aung Kyaw KyawJuly 3, 2021Reply
season 1 ep5and ep6cannot download
userdrive links would be best admin
Htet AungMay 19, 2021Reply
Ep 8 ကိုေသခ်ာျပန္တင္ေပးသင့္တယ္
Aung Thar HtetApril 26, 2021Reply
Thanks for ep 7&8! Love you all!😍
ChongApril 26, 2021Reply
Ep 8 error
Sitt aw maungJune 17, 2021Reply
Season3လေးလည်း မျှော်နေမယ်နော်
Aung Thar HtetApril 25, 2021Reply
GrangerApril 25, 2021Reply
Wai Yan MoeApril 21, 2021Reply
Ko KoApril 11, 2021Reply
We are waiting for that new episodes
Ko ThuApril 8, 2021Reply
Ye thwayApril 15, 2021Reply
Pls keep going GC we are waiting
Ko ThuApril 7, 2021Reply
လတ္တေလာအေျခေနေတြေၾကာင့္ Request လုပ္ရတာ
မ်က္နွာပူ အားနာေနရေပမယ့္ ဒီ Serieကိုေတာ့ေန႔တိုင္းကိုေစာင့္ေနရတာပါ GC Team ရယ္ 😁
A NyoApril 7, 2021Reply
lar par ml
Htet AungApril 6, 2021Reply